Ny Apple voalohany sy ny Series 1 dia tsy mitovy | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple voalohany sy ny Series 1 dia tsy mitovy
Tamin'ny voalohany dia nanana fisalasalana aho, ary izany dia ny mpampiasa rehetra no nanana izany. Inona no niova? Ny famantaranandro vaovao dia ny Apple Watch Series 2, koa inona marina ny Series 1? Valiako ianao: maodely vaovao io, eny, amin'ity taona ity, nohavaozina ary tena vaovao. Ahoana no tsy itovizan'ny andiany iray amin'ny iray hafa? Iza no tokony hovidiko arakaraka ny fampiasana omeko azy sy ny mpampiasa azy? Mendrika mitahiry € 100 ve ianao ary misafidy andiany 1 sa aleo aho mitsambikina faharoa?
Androany aho hiresaka momba izany, ary nandray fanapahan-kevitra lehibe aho. José Alfocea dia efa nampitandrina ahy fa hanova ny sainy hatrany momba an'io. Naneho hevitra be dia be aho fa tsy nanoro ny Apple Watch Series 2 ary toa lafo be ilay izy. Mifikitra amin'izany aho, izany no antony nieritreretako ny hividy ny alimo Series 1 dieny izao. Izaho dia nianatra zavatra betsaka momba ny fahasamihafana sy ny tombony ary ny fatiantoka eo amin'ireo maodely roa ireo. Vakio hatrany ny antsipirian'ny fiambenana sy ny fandefasana ahy momba an'io.
1 Apple Watch Series 1 na Series 2?
2 Inona no ho hitanao ao amin'ny Series 2
3 Fitoviana mitombina, ny vidiny izay tsy
Apple Watch Series 1 na Series 2?
Araka ny nolazaiko dia nahita lahatsoratra sy vaovao nilaza aho fa ny vaovao dia Andiany 2 raha ny iray kosa dia 2015. Tsy toy izany. Marina izany amin'ny famolavolana dia mitovy daholo izy rehetra ary izany na mihoatra na kely dia mitovy fitaovana, fa misy zavatra miova. Eo anelanelan'ny Apple Watch voalohany sy ny Series 1 dia misy fahasamihafana maro. Amin'ny ankapobeny dia ny mpikirakira ihany, fa adika amin'ny: bateria bebe kokoa, fampisehoana tsaratsara kokoa, ankoatry ny hery tsy mbola fahita tamin'ny fanodinana dual-core vaovao. Saingy ny fahasamihafana izay ho hitantsika manoloana ny Series 2 vaovao dia tsy dia be loatra koa. Mpampiasa maro izay hividy ny famataranandro no hitady ilay vaovao, ilay manomboka amin'ny € 439, izay ilay natolotr'izy ireo ho revolisionera, fa ny andiany 1 dia mety hatolotra bebe kokoa raha tsy hanao isika fampiasana ny zava-baovao. Mba hanananao mazava kokoa. Etsy ambany no hanomezako anarana ary hanazavana fohifohy ny andiany 2 izay tsy ananan'ny Series 1.
Inona no ho hitanao ao amin'ny Series 2
Lehibe sy katalaogin'ny modely. Ny andiany 2 dia misy amin'ny maodely rehetra, manomboka amin'ny aluminium ka hatramin'ny Edition amin'ny alàlan'ny vy tsy misy fangarony. Etsy ankilany, ny Series 1 dia ho hita ao amin'ny alimina misy tady silikaly ihany. Fa raha hisafidy an'ity maodely ity ianao dia tsy hanana olana amin'ny fisafidianana andiany iray sy iray hafa.
GPS natsangana tao anaty fikirakirana roa-core. Tsy processeur tsara kokoa ho an'ny Series 2 izy, mitovy ihany. Haingana kokoa noho ny famantaranandro voalohany tamin'ny 2015, saingy ny andiany roa amin'ity taona ity dia mitovy. Raha mila na maniry ny GPS ianao dia tsy maintsy manomboka amin'ity maodely ity satria tsy manana an'io ny Series 1.
Ity Apple Watch ity dia rendrika anaty rano 50 metatra. Ny andiany 1 dia mahazaka fanoherana, toy ny iPhone 7 sy 7 plus. Tsy midika akory izany fa ny fiantohana dia manarona ny fahatapahan'ny rano, saingy velona izy io ary misy aza ireo mpampiasa mandro na mandro miaraka aminy. Ny andiany 2 eny dia azonao mandena azy tsy amin-tahotra ary ento any amoron-dranomasina, amin'ny ranomasina na amin'ny ony ary amin'ny pisinina amin'ny fiarovana tanteraka.
Fampisehoana mihiratra noho ny hatramin'izay. Hatramin'ny avo roa heny. Ny andiany 1 dia miakatra hatramin'ny 450 nits, Series 2 na dia 1000 nits aza. Samy tsara tarehy izy roa, na dia amin'ny masoandro aza, ka tsy mendrika ny hampiakarana ny vidiny.
Fitoviana mitombina, ny vidiny izay tsy
Izay ilay izy, ireo no mampiavaka ny Apple Watch. Ny zavatra farany manasaraka ny andiany dia ny vidiny. Ny fahasamihafana dia € 100. Mendrika handoavana bebe kokoa ve ilay GPS, ny fahaizana mandroboka azy, na ny efijery mazava kokoa? Heveriko fa tsy ho ahy, satria tsy hampiasa an'io aho. Aleoko mitsitsy vola, fantatro fa ny maodeliko dia ilay silipo ary izy ireo dia ao anaty andiany roa. Mitovy ny herinaratra ary noho izany tsy ajanona ao aoriana. Ny maodely 38mm Series 1 dia mitentina 339 € ary ny modely 42mm € 369. Mandeha amin'ilay lehibe aho, toy ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple voalohany sy ny Series 1 dia tsy mitovy
Fanontaniana… inona ny mahasamihafa ny Sport sy ny Series 2?
Raha manadino ahy tsara ny fahatsiarovana, ny tsy fitovizan'ny Watch Sport (taranaka voalohany) sy ny Series 2 dia ity mampiditra GPS, efijery mamiratra kokoa, ary puce vaovao haingana kokoa. Heveriko fa tsy misy fahasamihafana intsony, na dia mieritreritra aza aho fa tadidiko fa mampiditra batterie kely kokoa izy io, saingy nofoanana io amin'ny alàlan'ny fanjifana ny GPS.
Miala tsiny fa ny andiany 1. Ny lohatenin'ny lahatsoratra no nolazaiko fa tsy nampitahanao izy ireo
Marina, nampitahiko tamin'ny Series 2. Tsy izaho no mpanoratra ny lahatsoratra haha. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sport (taranaka voalohany satria tsy misy intsony), sy ny Watch Series 1, dia ny famirapiratany mamiratra kokoa sy ny fikirakirana haingana kokoa. Heveriko fa ireo ihany no tsy itovizany. Io famantaranandro io ihany fa somary nihatsara tamin'ireo lafiny ireo.
Ny andiany 7000; an'iza amin'ny andiany 1 na andiany O. Inona ny vidiny vaovao amin'ny andiany 7000? Misaotra indrindra anao
Vahaolana amin'ny olana amin'ny fametrahana macOS Sierra: "ny fanamarinana ny sonian'ny sandan'ny installer dia tsy azo tanterahina"
Surf session miaraka amin'ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus vaovao